Ufele emanyaleni owengane 'enobaba ababili' | News24
Ufele emanyaleni owengane 'enobaba ababili'
Durban - Ufele emanyaleni owesifazane waseNewlands East, entshonalanga yeTheku obenengane enenyanga izelwe okusolwa ukuthi ubulawe yishende ngokuba limphuzise ushevu bebanga ingane, kubika ILANGA.
Kuthiwa ingoduso ibiphume esokeni layo isanda kubeletha yathi iyovakashela abakubo, iyobakhombisa ingane, kanti ihambisa ingane eshendeni layo nalo ebelazi ukuthi ingane ngeyalo.
Kuduma ikhanda kuMzwenhlanhla Gumede, 43, waseMkhomazi eningizimu yeTheku, ngesigameko sokushona kwengoduso yakhe, uNonhlanhla Cekwayo, 31, abeyilindele ukuba ibuye ekhaya izolo ngeSonto.
UGumede ukhala ngokuthi indodakazi yabo esanda kuzakwa akayazi nokuthi ikuziphi izinkalo, njengoba kuthiwa ibaleke neshende lengoduso yakhe engasekho emhlabeni.
ILANGA lixoxe noGumede obezwakala ngisho ekhuluma ukuthi uphithene ikhanda ngento emehlele.
Uthi ingoduso yakhe ibinamasonto amabili ihambile emzini wabo iyovakashela abantu bakubo ePort Shepstone.
Uthi selokhu yahamba ingoduso ibingakaze ilibhade kubo kwayo, ibihleli neshende sonke lesi sikhathi.
Uthi ubexhumana nayo ngocingo yize kwesinye isikhathi ibibuye iluvale ucingo imkhohlise ngokuthi ibingashajile.
“Sonke lesi sikhathi ngiyifonela ibingitshela ukuthi ikubo kanti nonina uyayinqabela ukuba ibuye, uthi ingane isencane mayihlale ikhulise ingane.
OLUNYE UDABA: Uyagonyuluka 'umahosha owabulalisa umyeni'
“Ngigcine ukukhuluma nayo ocingweni ngoMgqibelo emini savumelena ngokuthi ekuseni izobuya. Ngethuke ngacishe ngashayeka phansi uma sengifonelwa ngumuntu engingamazi engitshela ukuthi mangiphuthume eNewlands ufanise inkosikazi yami ilele phansi eceleni komuzi angawazi idinga usizo,” echaza.
Uthi uqale waba nokunqikaza uma ethola lolu cingo ngoba yena ubazi ukuthi ingoduso yakhe isemakhaya futhi ubekade egcine ukukhuluma nayo emini yaqinisekisa ukuthi isemakhaya izobuya ngakusasa.
UGumede uthi uthole ngomakhelwane balapho bekuqashe khona ishende layo ukuthi kube nengxabano ngoMgqibelo, owesifazane efuna ukugoduka kodwa isoka lingafuni, lithi akahambe yedwa ashiye ingane.
“Ngithuke ngacishe ngashayeka phansi sengithola ukuthi lelo soka ngumuntu engimaziyo obesebenza nayo ingoduso yami. Kwesinye isikhathi ubeyivakashela ingoduso yami ehamba namanye amantombazane abasebenza nawo."
Uthi omakhelwane bamtshele ukuthi ngemuva kwengxabano isoka liphuzise owesifazane okuthile abasola ukuthi ushevu ongathathanga isikhathi eside wabonakala esekhala ngezinhlungu esiswini, nokuthe uma ezama ukuyofuna usizo wawela phansi, esephelelwe amandla, kwaba ukushona kwakhe.
Kuthiwa isoka lisukume ngaleso sikhathi lathatha ingane lahamba nayo, kanti namanje abaziwa ukuthi bakuziphi izinkalo.